July 2020 - RealThadin
နက်ဖြန်ထွက်မဲ့ သိန်းထီဆုကြီးကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မြင်မြင်ချင်းရှဲသွားလိုက်ပါနော်
July 31, 2020 RealThadin 0
ရွှေမြွေတွေနဲ့ရွှေဥတွေပါ မြင်မြင်ချင်းရှယ်သွားနော် နက်ဖြန်ထွက်မဲ့သိန်းထီဆုကြီးကို ဆွတ်ခူးရရှိပါလိမ့်မယ် မယုံမရှိနဲ့နော် ကိုယ်တွေ့ကြုံဖူးလို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်… လူကြီးမင်းတို့လဲ နက်ဖြန်ထွက်မဲ့သိန်းထီဆုကြီးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေနော်…. မေတ္တာဖြင့်ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်.. Unicode ရွှေမြွေတွေနဲ့ရွှေဥတွေပါ မြင်မြင်ချင်းရှယ်သွားနော် နက်ဖြန်ထွက်မဲ့သိန်းထီဆုကြီးကို ဆွတ်ခူးရရှိပါလိမ့်မယ် မယုံမရှိနဲ့နော် ကိုယ်တွေ့ကြုံဖူးလို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်… လူကြီးမင်းတို့လဲ နက်ဖြန်ထွက်မဲ့သိန်းထီဆုကြီးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေနော်…. မေတ္တာဖြင့်ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်..
အဂ်လန်နိုင်ငံက သတင်းမီဒီယာတွေမှာ အရမ်းကို လူပြောများနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကမိန်းကလေး ဆုလှိုင်
အခုတလော မြန်မာနိုင်ငံက မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ မ ဆုလှိုင်ဟာ အဂ်လန် နိုင်ငံက သတင်းမီဒီယာတွေ ထက်မှာ အရမ်းကို နာမည်ကြီးနေတယ်လို့ သိရပါတယ် နာမည်ကြီးရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက တော့ သူမ ရဲ့ သေးငယ် လှတဲ့ ခါး အရွယ်အစားအကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်…. ဆုလှိုင် ရဲ့ ခါးဆိုဒ်က […]
အသက်(၂၆)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ မှာ မိဘနှစ်ပါးကို သိန်း( ၂၀၀ )ကန်တော့ခဲ့တဲ့အပြင် အမတွေကိုပါကန်တော့ခဲ့တဲ့ ​နေဆန်း
ဒီနေ့ဇူလိုင်လ(၃၁)ရက်နေ့ ကတော့ ပရိသတ်အချစ်တော်လေးနေဆန်းရဲ့ အသက်(၂၆)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အလှူအဖြစ် သူ့ရဲ့အနုပညာကြေးထဲကငွေသိန်း(၂၀၀)ကို မိဘနှစ်ပါးအားကန်တော့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အစ်မဖြစ်သူတွေကိုလည်း ပိုက်ဆံ၊လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့အတူကိုယ်တိုင်ကန်တော့ခဲ့ပါသေးတယ်။ ရွာထဲမှာရှိတဲ့ အသက်ကြီးအဖိုးအဖွားတွေ ကိုလည်း ပိုက်ဆံနဲ့လိုအပ်တာတွေလှူဒါန်းပေးခဲ့ကြောင်းအဆိုပါအလှူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာယခုလိုပဲရေးသားဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။” ဒီနေ့မွေးနေ့မှာအဖေနဲ့အမေကို သိန်း( ၂၀၀ )ကန်တော့ခဲ့ပြီး အမတွေကိုလည်းကန်တော့ဖြစ်ခဲ့တယ် ရွာမှာ လူကြီးတွေကို လှူခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအရမ်းပိတိဖြစ်မိပါတယ်အားပေးတဲ့ပရိတ်သက်များကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်”ဆိုပြီးနေဆန်းကအလှူပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူဖော်ပြထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကလည်းမွေးနေ့အကြိုအလှူအ ဖြစ် […]
ထီထိုးထားသူတွေအတွက် ထီပေါက်စေမယ့်ထီပေါက်ဂါထာတော်ကိုမျှဝေလိုက်ပါတယ်…ယုံကြည်စွာရွတ်ဆိုပြီးကံထူးကြပါစေနော်.. ထီပေါက်ဂါထာတော်…ဧတဒဂ္ဂံ ဘိက္ခေ၀ မမသာဝကာနံ၊ ဘိက္ခူနံ ပဌမံ သလာကံ ဂဏှန္တာနံ။ယဒိဒံ ကုဏ္ဍဓါနော၊ ဧတေနံသစ္စဝဇ္ဇေန တထာမေဟောတု သဗ္ဗဒါ။” အနက်အဓိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်..ဘိက္ခဝေ၊ ရဟန်းတို့။ ဧတံ၊ ဤကုဏ္ဍဓါနသည်။ မမ၊ ငါဘုရား၏။ သာဝကာနံ၊သာဝကဖြစ်ကုန်သော။ ဘိက္ခုနံ၊ ရဟန်းတို့တွင်။ ပဌမံ၊ ရှေးဦးစွာ။ သလာကံ၊ […]
သုတေသန အသစ် တစ်ရပ် အရ ၂၀၇၀ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ သန်း ၃ ထောင်ကျော်ဟာ မနေထိုင် သင့်လောက်အောင် ပူပြင်းလှတဲ့ နေရာတွေ မှာ နေထိုင်ကြရလိမ့်မ ယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တကယ်လို့ သာ ဖန်လုံ အိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ် မှုသာ လျော့ကျမသွားဘူး ဆိုရင် လူအမြောက်အများ […]
နိုငျငံတျောကပုံမှနျဝငျငှမေရှိတဲ့အိမျထောငျစုတှကေိုထောကျပံ့တဲ့ ငှကေပျြသိနျး၅၀ကြျောကို ပွညျသူတှထေံမပေးဘဲအလှဲသုံးစားပွုလုပျခဲ့တဲ့မွောငျးမွမွို့နယျ၊ကံဘဲ့လေး‌ကြေးရှာအုပျစုအုပျခြုပျရေးမှူးကိုမွောငျးမွမွို့မရဲ့စခနျးမှာဖမျးဆီးစဈဆေးနတေယျလို့ ရဲတပျဖှဲ့ကပွောပါတယျ ကံဘဲ့လေးကြေးရှာအုပျစုရှိအိမျထောငျစု၂၇၃စုအတှကျတအိမျထောငျကို၂သောငျးကပျြစီနဲ့နိုငျငံတျောကထောကျပံ့ငှေ၅၄ သိနျး၆သောငျးကပျြကိုကြေးရှာအုပျစုအုပျခြုပျရေးမှူးဦးတငျမောငျဝငျးကပွညျသူကိုမပေးဘဲကိုယျကြိုးအတှကျသုံးစှဲခဲ့ကွောငျး စဈ‌ဆေးပျေါပေါကျခဲ့လို့မွောငျးမွမွို့နယျဒုအုပျခြုပျရေးမှုးဦးမြိုးခိုငျကတရားလိုပွုလုပျတိုငျတနျးခဲ့တာပါ။ မွောငျးမွမွို့မရဲစခနျးကတာဝနျရှိသူကဦးတငျမောငျဝငျးကို စဈဆေးတဲ့အခါမှာငှေ၃သောငျးပဲသူ့မှာကနျြတော့တယျ၊၄၉သိနျးကိုဓာတျမွဩေဇာဖိုးပေးခတြေယျ၊၅သိနျး၃သောငျးကိုသုံးစှဲတယျလို့ပျေါပေါကျခဲ့တယျ။ပွညျသူတှကေိုထောကျပံ့ငှမေပေးဘဲ ကိုယျကြိုးသုံးခဲ့လို့မွောငျးမွမွို့မရဲစခနျးမှာကံဘဲ့လေးကြေးရှာအုပျစုအုပျခြုပျရေးမှူးဦးတငျမောငျဝငျးကိုဖမျးဆီးစဈဆေးနပေါတယျ”လို့ ပွောပါတယျ။ ကံဘဲ့လေးကြေးရှာအုပျစုအုပျခြုပျရေးမှုးဦးတငျမောငျဝငျးကို မွောငျးမွို့မရဲစခနျးမှာရာဇသတျကွီးဥပဒပေုဒျမ၄၀၉နဲ့ဖမျးဆီးအမှုဖှငျ့စဈဆေးနတောဖွဈပါတယျ။မွောငျးမွမွို့နယျအတှငျး ကြေးရှာအုပျစုပေါငျး၁၁၄အုပျစုရှိပွီးပုံမှနျဝငျငှမေရှိတဲ့အခွခေံလူတနျးစားတှကေိုတအိမျထောငျငှကေပျြ၂သောငျးကပျြနှုနျးနဲ့ အိမျထောငျစုပေါငျး၂၉၃၅၁ စုအတှကျနိုငျငံတျောကဒုတိယ အကွိမျထောကျပံ့ငှစေုစုပေါငျး ၅၈၇,၀၂၀,၀၀၀ကပျြကို ထောကျပံ့ပေးအပျခဲ့တာလို့အထှထှေအေုပျခြုပျရေးမှူးရုံးကနေ စုံစမျးသိရှိရပါတယျ။ ဧရာဝတီတိုငျးအတှငျးနိုငျငံတျောမှပုံမှနျဝငျငှမေရှိတဲ့အိမျထောငျစုတှကေိုထောကျပံ့တဲ့ငှတှေကေို ပွညျသူတှမေပေးဘဲအလှဲသုံးစားပွုလုပျမှုနဲ့ဖမျးဆီးအရေးယူခဲ့တာ ပထမဆုံးအကွိမျလညျးဖွဈပါတယျ။ source : […]
သာမည ဆရာတော်ဘုရားကြီး ချီးမြှင့်ခဲ့သော ပုတီးစိပ်နည်း မသိသူ ကျော်သွား သိသူယူထား
သာမညဆရာတော် ဘုရားကြီး ချီးမြှင့်ခဲ့သော အချိန်အခါ ရွေးနည်းတွင် နေ့တစ်နေ့ ကို အချိန် အပိုင်းအခြားအလိုက် ကောင်းသောအချိန်နှင့် မကောင်းသောအချိန် အကြမ်းဖျင် ခွဲခြားထားပါသည်။ ငွေကြေးဓနနှင့် ဆိုင်သော စန်းနက္ခတ်တို့ ဖြစ်ထွန်းအားကောင်းသော မုဆိုးရွှေအိုး ရကိန်း အချိန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ တနင်္ဂနွနေ့ တွင် နံနက် […]